u-Philander uqeda ukulwa kwe-India ngokuhlasela kathathu
u-Vernon Philander ukhiphe ama-wicket amathathu okugcina kwi-innings yesibili ye-India emabholeni amane – elokuqala lanqakwa u-Quinton de Kock esondele kuma-stumps – ukuqeda imicabango yokuguqula izinto emsileni kumdlalo wokuqala we-Sunfoil Test e-PPC Newlands ngoMsombuluko ukunqoba ngama-runs angu-72 ama-Standard Bank Proteas.
Ngaphambi kokuhlasela kuka-Philander kube nethuba lokuthi i-India inganqoba njengoba u-Ravichandran Ashwin no-Bhuvneshwar Kumar behlanganise ama-runs angu-49 nge-wicket yesishagalombili emuva kokuphuma kwe-India ibe ku-82/7 bejaha ukunqoba bebekelwe u-208 obekushodelwa i-run eyodwa kulokhu abakuthola nge-innings yokuqala.
u-Philander uqede nama-career-best figures angu-6/42 – okungcono kuno-6/44 kudlalwa ne-New Zealand e-Hamilton ngo-2011/12.
Kube i-five-wicket haul yakhe yesi-12 kwimidlalo yama-Test, u-Dale Steyn (26), u-Allan Donald (20), u-Makhaya Ntini (18), u-Shaun Pollock (16) no-Hugh Tayfield (14) abenza kangcono kwi-South Africa.
Kube ivuthondaba elihle kumdlalo obumnandi ophele ezinsukwini ezintathu. Okube usuku lokugcina, kuphume ama-wicket angu-18 ngama-runs angu-200 njengoba ama-Proteas aqale aphuma kwi-score sabo sasebusuku u-65/2 baphuma bonke ku-130 kuma-overs acishe afika ku-22 futhi i-India yaphuma yonke ku-135 kuma-overs angu-42.4.
Lokhu kuqhathaniswa nama-wicket angu-23 aphuma osukwini olulodwa ngama-runs angu-294 ngesikhathi ama-Proteas ebuyela kahle emdlalweni anqoba edlala ne-Australia enkundleni eyodwa ngo-2011.
Ekugcineni ukuba ngaphambili ngama-runs angu-77 kwi-innings yokuqala bekubalulekile kuma-Proteas.
Ukuhlangana kwemvula kanye namafu osukwini lwesithathu kwakhe indawo yokudlala ibinobunzima kunosuku lokuqala. Ngaphandle kwabadlali abaphume nge-lbw noma akade be-bowled, cishe wonke ama-wicket aphume ngokunqakwa emuva kwama-wicket.
u-Wridhiman Saha unqake amabhola angu-10 kumdlalo kwi-India bese u-De Kock wanqaka ayisikhombisa kuma-Proteas. Iqembu lasekhaya linqake kangcono kwi-slip, u-Faf du Plessis no-AB de Villiers benqake amabhola amabili umuntu emunye kanye no-Chris Morris ongenele omunye umdlali unqake elilodwa kwi-gulley.
u-Philander ube i-Sunfoil Man of the Match ngokuthola u-9/75 kanti no-AB de Villiers ebethole u-50 kwi-innings yokuqala waphinda wahlanganisa ama-runs angu-35 kulawa angu-65 ama-Proteas akwaze ukuwathola ekuseni.
i-Sunfoil Educational Trust (SET) ithole u-R214 000 ngama-boundaries, o-six kanye nama-wicket akhishiwe.
u-Dale Steyn ukhishiwe kwi-Test yokuqala u-Pandya ukopela ukuhlasela kwa-AB ukunciphisa ukuhola kwama-Proteas Ukuhlasela okuholwe u-De Villiers kuphindisele ama-Proteas endleleni Ukukhetha iqembu okunzima kakhulu lokhu - u-Du Plessis u-Philander ubuyele emdlalweni Abadlali bakutholile akade bekudinga kumdlalo wokugcina wamalungiselelo – u-Gwavu u-De Villiers ukuphakamisela izithupha ukudlala ngebhola elibomvana Ama-wicket amahlanu ka-Morkel no-Maharaj anqobise ama-Proteas nge-innings Ikhulu lika-Markram nokuhlasela ngebhola elisha kwa-Morkel kubeka ama-Proteas ngaphambili u-Du Plessis uzophuthelwa i-Test ye-Zimababwe; u-De Villiers uzoba ukapteni u-De Villiers uyilungele inselelo yebhola elibomvana